Hagayaasha Bilowga ah ee SQL Cirbadeynta iyo Qoraalka Iskutallaabta | Martech Zone
Hagayaasha Bilowga ah ee SQL Cirbadeynta iyo Qoraalka Iskutallaabta
Arbacada, Janaayo 3, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Ma joogo meel aan aad uga walwalsanahay amniga, laakiin waxaan inta badan maqlaa nuglaanta aan iska ilaalineyno. Waxaan si fudud u weyddiiyaa qaar naqshadeeye qaab dhismeed caqli leh wuxuuna igu dhahaa, "Haa, waanu daboolan nahay.", Ka dib markaa hantidhawrka nabadgelyadu wuu soo noqday isagoo nadiif ah.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira laba 'haak' amni ama nuglaansho aad ka aqrisan karto wax badan shabaqa maalmahan, SQL Injection iyo Cross-Site Scripting. Waan ka war qabay labadaba waxaanan aqriyay wax yar oo ka mid ah 'techy' wargeysyada iyaga ku saabsan, laakiin ma ihi barnaamij barnaamij run ah, inta badan waxaan sugi lahaa cusbooneysiinta amniga ama kaliya waxaan hubin lahaa in dadka saxda ah ay ka warqabaan oo aan horay u sii socon lahaa.
Labadan nuglaansho waa waxyaabo ay tahay in qof walba ka feejignaado inkastoo, xitaa suuqgeeye. Si fudud ugu dhajinta foomka websaydhka ah ee fudud boggaaga ayaa runtii u furi kara nidaamkaaga illaa waxyaabo xun.
Brandon Wood waxay qabatay shaqo weyn oo qorista Tilmaamaha Bilowga ee labada mowduuc oo xitaa adiga ama anigu aan fahmi karo:
Farxad Sanadka Cusub… Malaha
U jabitaanka Goobaha ugu Sarreeya 100,000
Jan 3, 2007 at 11: 40 AM
Wow, waad ku mahadsan tahay qoraalka Doug. Waxaan dareemayaa sharaf… 🙂
Dhibaatada aad ku sifeyneyso runtiin sida loo ogaado noocyada nuglaanta waa dhibaatada ugu weyn ee aan arko Haddii aan tuso barnaamijiye aan wax ka aqoon amniga qayb sir ah oo aan waydiiyo inay ammaan tahay, dabcan waxay dhihi doonaan ammaan buu yahay - ma garanayaan waxay raadinayaan!
Furaha dhabta ah ee halkan ka jira ayaa ah in aan ku horumarino horumariyayaasheena waxa la raadinayo, iyo sida loo hagaajiyo Taasi waxay ahayd ujeeddada ka dambaysay labadayda maqaal.
Jan 3, 2007 saacadu markay ahayd 2:37 PM
Ma noqon karto meesha saxda ah laakiin wuxuu u yimid inuu ogeysiiyo wax culus.
PS: Waxaan jeclaan lahaa inaan ku wargaliyo halista ugu weyn ee ku jirta wordpress ee aan awooday inaan helo .Faahfaahinteeda ugu weyn ee wordpress oo halisteeda leh 7 / 10.Ma xayeysiinayo laakiin waxaan fiiriyaa qoraalkayga html-irbad-iyo-ahaansho Fadlan ha u ogeysiin arrintan boggaga kale. Waxaan wadahadal kula yeeshay Matt (WordPress) emayl ku saabsan
Jan 6, 2007 saacadu markay ahayd 8:43 PM
Waad ku mahadsantahay inaad ii ogeysiisay tan - Waxaan u cusbooneysiiyay WordPress 2.0.6. Waxaan aaminsanahay inay ka taxadartay arrintan.
Jan 6, 2007 saacadu markay ahayd 8:47 PM
Haa way dhaaftay hadda. Wanaagsan in nooca soo socda uu si dhakhso leh u soo baxay
PS: ma heli karnaa isku xirka isku xirka? ii sheeg haddii aad jeceshahay fikradda
Jun 25, 2008 at 3: 33 PM
WordPress MySQL iskaan offline?
Ma jiraa qalab la heli karo oo iskaan ku sameyn kara an
miiska aan lahayn WordPress Miiska MySQL ee laga dhoofiyey phpMyAdmin?
Waxaan haynaa WordPress MYSQL database oo umuuqda inuu haysto
ayaa laga duray SQL.